Imigaqo kunye neMiqathango yeeNkonzo eziManyanisiweyo eziHlanganyisiweyo kunye neeNkampani Inc.
Kwesi siVumelwano ("isiVumelwano") "wena" kunye "akho" abhekisa kumthengi ngamnye, "thina," thina, "" bethu, "" GCS, "kunye" nenkampani "kubhekiswa kwiJeneral Corporate Services, Inc. (loo nto Ukulawula amagama e-brand Iinkampani ezihlanganisiweyo, abaCwangcisi boKhuseleko lweeaseti, iNkampani yeOfficial Off, kunye nezinye ibranti kunye neewebhusayithi), iikontraki zayo, iiarhente, abasebenzi, amagosa, abalawuli kunye nabaxhasi kwaye "Iinkonzo" zibhekisa kwiinkonzo ezibonelelwe kuthi. Esi siVumelwano sichaza uxanduva lwethu kuwe kunye nezibophelelo zakho kuthi njengoko zinxulumene neeNkonzo. Ngokusebenzisa Iinkonzo eziphantsi kwesi siVumelwano, uyavuma ukuba ufunde kwaye wavuma ukubophelelwa yiyo yonke imiGaqonkqubo yesi siVumelwano kunye nayo nayiphi na imigaqo okanye imigaqo-nkqubo ehambelana okanye epapashiweyo ngathi. Uyavuma ukuba ungaphezulu kweminyaka elishumi elinesibhozo ubudala, okanye kungenjalo wafikelela kubudala abaninzi kulawulo lwakho.
Ngokuthe ngqo kwesi siVumelwano, i-GCS iya kwenza uphando lwangaphambili, olungabophelelanga ukukhangela ukuba igama lenkampani oyikhethileyo sele lisetyenzisiwe lelinye ishishini kurhulumente wakho okhethiweyo, iphondo okanye ilizwe. (I-Corp, inkampani enamatyala enkampani, kunye / okanye iintlobo ezifanayo zeqela zisetyenziswa ngokuchaseneyo apha.) Ukuba igama lakho lenkampani alikho, i-GCS iya kuthi (ngolandelelwano lokhetho oludweliswe nguwe kwisicelo sakho) ikhangele enye indawo yecandelo amagama awunike de iziphumo zokukhangela zivelise igama elihlanganisiweyo elikhoyo. Kwimeko apho ungabandakanyi umyili ofanelekileyo wobumbano (okt, "Inc.," "Corp.," okanye "Corporation") i-GCS iya kongeza "Inc." (okanye "LLC" kwiinkampani ezinamatyala athile) Ukugcwaliswa kwefayile kuluntu lwakho olukhethileyo, iphondo okanye ilizwe.
Uyavuma ukuba unoxanduva lopelo lwamagama (Corporate) osinikezileyo. Uyavuma ukuba ukhangele kabini ukuba igama lenkampani apha lipelwe kanye njengoko unqwenela. Uyaqonda ukuba esi sicelo asiphindeki emva kokufaka isicelo sakho.
Ngelixa sisenza zonke iinzame zokufumana olona lwazi luhlaziyiweyo, asinakuqinisekisa ukuba lolona lwazi lufumanekayo malunga nokufumaneka kwegama elidibeneyo linikezelwe kuthi. Ngokuhambelana, asiqinisekisi ukuba igama liyafumaneka ukuze lisetyenziswe njengegama lenkampani kurhulumente wakho, kwiphondo okanye kwilizwe lakho. I-GCS ayinoxanduva nangayiphi na indlela yokuxhomekeka ekufumanekeni kwegama lenkampani. Ngapha koko, sicebisa ukuba ungaziprinteli iiletahedi, amakhadi eshishini okanye wenze naluphi na utyalo-mali egameni de ufumanise ubungqina bukarhulumente bokuba igama livunyiwe kwaye nenkampani sele ifakiwe.
Kwimeko apho igama lakho lomdibaniso kunye nezinye iindlela zingekafumaneki kwaye ungaboneleli ezinye iindlela ezibhaliweyo ngokubhala ngomhla woku-odola, ugunyazisa i-GCS ukuba yongeze amagama athi "amashishini," "Ukubamba," "uLawulo," "Ukuhamba," okanye u "capital" ukuya esiphelweni segama. Ukuba ezinye iindlela azifumaneki unyango lwakho lodwa luya kuncitshiswa kwimirhumo ehlawulwa kwi-GCS. Jonga icandelo lokubuyiselwa kwemali kunye neendlela zokwenza ulwazi apha.
Asikwazi kwaye asijongi ukubona ukuba igama lenkampani olikhethayo, okanye ukusetyenziswa kwegama lenkampani, kuyakwaphula amalungelo asemthethweni abanye. Sikubongoza ukuba uphande ukuze ubone ukuba igama lenkampani oyikhethayo okanye ukusetyenziswa kwalo linyhasha amalungelo asemthethweni abanye, kwaye sicebisa ukuba ufune iingcebiso zesiluleko esinobuchule esinelayisensi yokuqhuba umthetho kulawulo olusebenzayo.
Ukuba i-odolo yenkampani yase-US iyarhoxiswa emva kokuba intlawulo ithathiwe yi-GCS kodwa ngaphambi kokuba kugqitywe igama lokutshekisha, i-GCS iya kubuyisa ixabiso lemali lilonke ngaphandle kweendleko ezenziweyo kunye nentlawulo yokuhlawulwa kwedola eyi- $ 95. Ukuba i-odolo icinyiwe emva kokuba i-cheque igqityiwe kodwa ngaphambi kokuba amaxwebhu enziwe, i-GCS iya kubuyisa imali iyonke eyixabiso elingaphantsi kwe- $ 125 yokuhlawula intlawulo. Ukuba i-odolo icinyiwe emva kokuba kudalelwe amaxwebhu okuqulunqa, i-GCS iya kubuyisa yonke imali yoku-odola imali engaphantsi kwe- $ 195 yedola yokuhlawula inkulumbuso ukuba uxwebhu lokuqulunqa alunangeniswa kurhulumente. Nge-odolo yenkampani engaphandle kwe-US, ukuba i-GCS igunyazisa ukubuyiselwa kwemali ephezulu kakhulu iyimali ehlawulwa kancinci kuneyikhulu kwi- $ 495 okanye ngepesenti yexabiso lokuthenga. Ukongeza, imali ebibhatelwe kwi-GCS esele ihlawulwe kurhulumente ngokufaka iifayile, kumdibaniselwano, kubathengisi okanye kwezinye iindleko zokufezekisa iodolo yakho ayibuyiswa, kubandakanywa, kodwa kungaphelelanga apho, kwimirhumo yokuhlawulwa kwamakhadi etyala.
Xa sele kuthunyelwe inkampani okanye uxwebhu kurhulumente lokugcwalisa egameni lomthengi okanye itrasti okanye olunye uxwebhu sele luqulunqiwe iodolo ayinakubuyiswa okanye icinywe.
Intlawulo eyi- $ 75 iya kongezwa kuzo zonke iitsheki ezibuyiselwe kwi-GCS ngenxa yengxowa-mali engonelanga okanye iiakhawunti ezivaliweyo. Ukongeza, umrhumo wenkonzo yebhanki uya kutsalwa kwezi ntlawulo.
Ukongeza, ngelixa i-GCS iza kuya kwiinzame ezinkulu zokuhlalisa abathengi bethu, umatshini okanye impazamo yomntu inokwenzeka. Ke ngoko, ukuba nasiphi na isizathu isicelo sakho sokungenela, isicelo sokwenziwa kwe-LLC, isicelo sokuthemba, ukukhangela uphawu lwentengiso okanye isicelo sokulungiswa kweshishini okanye esinye isicelo silibaziseka ngokungenangqondo, sitshabalalisiwe, sibekiwe endaweni engalunganga, okanye ngenye indlela, ilahlekile, i-GCS AYISAYI KUPHELA XA KUFUNEKA IQINISEKE NAYE, OKANYE IIFAMA ZE-COMPENSATORY. UKUHLAZIYWA KAKHO NGOKUGQIBILEYO KWI-GCS KUYA KUQHALASELWA NGOKUQINISEKILEYO KWAKHO NONKE IZIMALI EZIHAMBELWE I-GCS ZEENKONZO ZETHU NJENGOKO IYAFUMANEKA NGEZIXESHA NEMIQATHANGO.
Kwimeko apho kufakwe iodolo ekhawulezileyo, siya kwenza zonke iinzame zokugqibezela ukufayilisha ngokubhekisele kwisicelo sakho. Ngenxa yokuba i-GCS isenza zonke iinzame zokuqinisekisa ukuphelela kunye nokugqibelela kokufayilisha kwakho, asiqinisekisi ukuba i-odolo iya kugcwaliswa ngexesha olicelileyo. Kwimeko apho i-oda yakho engxamisekileyo ingafakwanga ngela xesha, olona nyango lwakho luza kuphela kwimbuyiselo yemali eyongezelelweyo ehlawulelwe ukufayilisha ngokungxamisekileyo.
Ukuba uhlawule ngetshekhi ngefeksi, jonga ngefowuni, utshekishe kwi-Intanethi, nge-ACH okanye ngendlela efanayo, uya kubanjwa u-odolo de abe ibhanki yethu iqinisekise ukuba intlawulo yakho igqityiwe. Ixesha eliqhelekileyo ziintsuku ezintathu zeshishini, ngaphandle kweempelaveki okanye iiholide zebhanki. Eli xesha lixhomekeke ebhankini hayi kwi-GCS. Kuphela kusemva kokuba sifumene isiqinisekiso sokuba iimali sele zicocekile siqalise ukulungisa iodolo yakho.
I-GCS iya kumzamo omkhulu ukunxibelelana nabathengi. Nangona kunjalo, yonke imiyalezo ngefowuni, ii-imeyile okanye ezinye iindlela zonxibelelwano zinokungafumani mpendulo ikhulu elinanye leepesenti.
Umyalelo ubekwa ngexesha ungeniswa kwi-GCS nge-Intanethi, ngefowuni, ngefaksi okanye ngeposi. Uhlengahlengiso alunakwenziwa kwi-oda yakho emva kokungenisa ngaphandle kokugunyazwa kwangaphambili yi-GCS. Emva kokufumana ugunyaziso lwangaphambili, ukulungiswa komyalelo kusebenza kuphela emva kokuba i-GCS ifumene isicelo esayiniweyo nesibhaliweyo esivela kuwe ngefsimile. Kukho inkcitho yezemali kunye nexesha ukuzalisa iodolo. Ke ngoko, naziphi na izicelo zokurhoxiswa kufuneka zingeniswe kwaye zamkelwe kuthi ngerejista yemeyile ebhalisiweyo eceliweyo okanye kwifomu yethu yoqhakamshelwano kwa-https: //companiesinc.com/24 iiyure zeshishini ngaphambi kokuba sithumele iodolo yakho kwiarhente karhulumente yokugcwalisa okanye ngaphambi kokuba inkonzo ibe. kubonelelwe Iiyure zomsebenzi ezininzi ngeempelaveki zi-6: 00 AM ukuya kwi-5: 00 PM PST ngaphandle kweholide zikazwelonke.
Eminye imida ifuna ukuba unikezele ngamaxwebhu okhutheleyo ngaphambi kokuba inkampani ifayilishwe okanye ithunyelwe. La maxwebhu anokubandakanya kodwa anokungaphelelwanga kwikopi ebhalwe ngumbhali yencwadana yokundwendwela, uxwebhu lokuqala lobhaliso, iingxelo zebhanki, kunye / okanye incwadi ebhaliweyo. Kwimimandla ethile, sinakho ukufayilisha kodwa singeze siyikhuphe ngokusemthethweni inkampani yakho de ubonelele ngamaxwebhu. Kwezinye iindawo esihlawula kuzo kodwa asinakukwazi ukufaka ifayile kwinkampani yakho de ube unikezela ngamaxwebhu afunekayo. Eminye imisebenzi ifuna izimvo ezisemthethweni. Amanye amaxwebhu anokufuna ukuguqulelwa kwisiNgesi okanye kolunye ulwimi. Ukuba kukho imirhumo kwezi mfuno zongezelelweyo, unoxanduva lwazo. Sithwele inkcitho yokuseka inkampani efana nerhulumente kunye neefizi zearhente kwaye ezi ntlawulo aziyi kubuyiselwa kuthi. Wena ke, uyavuma ukuba unoxanduva lokubonelela ngamaxwebhu afunekayo okhathalazo, ngaphandle kwesicelo, nokuba imbuyiselo ayifumaneki ukuba awuhambelani nomthetho wenkuthalo ofanelekileyo.
Ukoneliseka komthengi kuthetha enye okanye ngaphezulu koku kulandelayo: (1) ukuba amaxwebhu amkelwe ukufayilishwa kwaye afakwe isitampu yiarhente karhulumente, okanye (2) ukuba amaxwebhu ayalelayo ayedwelisiwe kwaye ahanjiswa nokuba ngumphathi oqhelekileyo, ukuhambisa nge-elektroniki okanye ezinye iindlela. okanye (3) iinkonzo ezi-odolwe zenziwa. Ukuba enye yezi zinto ingentla iyinyani ngayo nayiphi na inxenye yomyalelo, uyavuma ukuba wanelisekile yiyo yonke iodolo.
SIYAZIYA ZONKE IZIPHAKAMISO, UKUZIPHATHA OKUNYE OKANYE KUFANELEKILEYO, ZESIBONELELO OKANYE NGOKUFANELEKILEYO KWENJONGO EBALULEKILEYO. Eminye imida ayikuvumeli ukukhutshelwa ngaphandle kwemvume ebekiweyo, ke oku kungasasebenzi apha ngasentla kungasebenzi kuwe.
Kunokubakho urhulumente ongezelelweyo okanye ezinye iintlawulo ezifanele ukuba emva kokuqulunqwa kwenkampani yakho okanye olunye uxwebhu kwaye / okanye kudluliselwe kuwe. Umzekelo, i-US State ye-Nevada ifuna ukuba uluhlu lwamagosa lufayilishwe kwakamsinya nje emva kokuba kufakwe umbutho. Okokubhaliweyo umrhumo wokugcwalisa yi- $ 150 kunye ne- $ 500 yelayisensi yeshishini. Omnye umzekelo ngowokuba ilizwe laseCalifornia linerhafu yonyaka yokuhlawula irhafu kwimali eyahlukeneyo kuxhomekeka kwingeniso yenkampani eqikelelweyo. Ukuba uthenge inkampani endala / isherifu, imali yokuhlaziya inokubakho kwakamsinya emva komhla wokuthenga. Ngenxa yokuba le mirhumo ingenxa yokugcwaliswa kwenkampani okokuqala, i-GCS ayinakukuhlawulisa ngale mfuneko yokugcwalisa kamva kwimirhumo yokufayilisha eyiyo. Uya kucelwa ukuba uhlawule ilizwe elilandelayo, ilizwe, iarhente kunye / okanye ezinye iintlawulo ngaphambi komhla wokugqibela ukuze ugcine inkampani yakho okanye elinye iqumrhu likwimo elungileyo kwilizwe okanye kwilizwe lokwenziwa kwalo. Kananjalo uyacelwa ukuba ugcine i-arhente ebhalisiweyo yenkonzo yenkqubo yezomthetho kwilizwe okanye ilizwe lokubandakanya kunye naliphi na ulawulo apho inkampani yakho, ngokomthetho ofanelekileyo, isenza ishishini. Ukuba i-GCS ibhatala imali yokuhlaziywa kwequmrhu lakho elisemthethweni, sithanda ukwenza njalo ngaphambi komhla omiselweyo. Kungenxa yokuba kuhlala kukho izohlwayo, ukuhlawulwa kade, izohlwayo kunye / okanye ukurhoxiswa okubekwa kwiinkampani ngenxa yokufota kade. Ukuhlawula kwangoko kusinika ikhefu lokunceda ukukhusela urhulumente okanye ezinye iziko kwiziphumo zokuhlanjwa kade. Luxanduva lwakho hayi olwe-GCS ukugcina isixhobo sakho somthetho sisimi kakuhle. Kukho imirhumo yokuhlaziywa kweetrasti zamanye amazwe kubandakanya, kodwa kunganyanzelwanga, kwitrasti nakwimali zikarhulumente. Okokubhaliweyo umrhumo weenkonzo zearhente ezibhalisiweyo yi- $ 189 ngonyaka ngalo naliphi na ilizwe laseMelika kunye ne- $ 245 ngonyaka kulo naliphi na iphondo laseKhanada. Iintlawulo zokuhlaziya ziyahluka kwamanye amazwe. Ukuba awuyibhatali intlawulo yakho yokuhlaziya kurhulumente kwaye inkampani yakho ihamba ngakwindlela ethile yokuma kurhulumente (isigama esishiyayo ngurhulumente), oko kukubonakalisa ukuba awusayifuni inkampani. Ukuba awuyazisi ngenye indlela i-GCS ngokubhala ngaphambi kokuma kwayo okucekisayo okubhalwe phantsi ngabaphathi, unika i-GCS imvume yokubeka inkampani ebonise ukuba awusafuni kuthengiswa njengenkampani endala, uhlengahlengise igama layo kunye / okanye. buyisela ukuma kwayo.
UKUFUNDA IIMFUNO ZOKUFUNDA
Eminye imithetho yelizwe ifuna ukuba inkampani ipapashe ubukho bayo kwiphephandaba elibekiweyo. I-GCS inokuthi, ngokuzikhethela kwayo, yenze lo msebenzi weklayenti, ngakumbi ukuba ifuneka kumfaki okanye umququzeleli wequmrhu. Iingxelo kwiwebhusayithi yethu zokuba isiseko esithi "Ixabiso libandakanya iifizi zokupapasha apho kufuneka khona" kuthetha apho kufuneka khona umfaki okanye umququzeleli. I-GCS ayizukupapasha okanye ihlawule umrhumo wokupapashwa kwamanye amazwe, kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho, kwiimfuno zokupapashwa kweNkampani eNamatyala eNew York. Ngokwenjenje uyaziwa ukuba xa ucela ukwenziwa kwe-New York LLC ukuba iimfuno zokupapashwa zinokuba yindleko enkulu kunokwenziwa kwe-LLC ngokwayo kwaye uya kuba noxanduva lwezi ntlawulo.
UMGAQO-NKQUBO WEMIMISELO NOKWENZIWA kwezemali
I-GCS yinkonzo yokushicilela kwi-intanethi. Izixhobo ezikule webhusayithi zinolwazi lwesicelo esiqhelekileyo kwaye azijoliswanga ukuba zithathe indawo yeengcebiso zegqwetha. Ngelixa abasebenzi bethu bachitha iinzame ezinkulu zokugcina kunye nokupapasha ulwazi oluchanekileyo, Imithetho yeLizwe, yePhondo neyeFederali iyasebenza kwaye ihlala ivela. Ukongeza, imithetho ivulekile ekutolikeni ezahlukeneyo kwaye yahluke kakhulu phakathi kwemida eyahlukeneyo.
Xa usebenzisa inkonzo yethu, uya kuba usebenza njengegqwetha lakho. I-GCS igcwalisa ulwazi kwiifom eziyimfuneko ngokusekwe kulwazi osinike lona "ekungeneni isicelo" sokuChwebesha "okanye" uQinisekiso lweNtsebenzo "kwaye ifayile yeefom ezifunwayo ngurhulumente ofanelekileyo, iphondo okanye iarhente yomanyano. Ngokukubonelela ngale nkonzo, i-GCS, abacebisi bayo, iiarhente, abameli, kunye nabasebenzi abanikezeli nakuphi na okusemthethweni, irhafu okanye enye ingcebiso yobuchule okanye inkonzo, kwaye akukho zimelo okanye iwaranti, echaza okanye ebekiweyo, banikwa malunga nemithetho okanye ezinye iziphumo. isiphumo sokusetyenziswa kweenkonzo zethu okanye iifom.
I-GCS, abacebisi bayo, iiarhente, abameli, kunye nabasebenzi abazibandakanyi ekusebenzeni komthetho kwaye abanakukunika iingcebiso zomthetho. Nangona i-GCS ibhengeza imizamo enkulu kwaye ihlonipha uhlobo oluyimfihlo lolwazi oluthumela kuthi, AKUKHO BUNGOZI UXANDUVA okanye ilungelo elithile phakathi kwe-GCS nawe, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kulo naluphi na ulwalamano lweGqwetha-loMthengi elinokubakho xa uthe waxoxa negqwetha elinelayisensi. .
Ukuba uthetha negqwetha elihlangeneyo ne-GCS, uyavuma ukuba akukho nto kufuneka ithathwe njengengcebiso yezomthetho kulo naliphi na ityala okanye imeko nganye. I-GCS kunye / okanye amagqwetha adibeneyo anika ulwazi ngokubanzi kuphela, ayingobacebisi berhafu, kwaye abanayo kwaye abayi kukubonelela nangayiphi na ingcebiso yezomthetho, yerhafu okanye yokuthobela malunga neenkonzo zethu. Kuya kufuneka ufune iingcebiso ezizimeleyo kwezomthetho kunye nerhafu. Uninzi okanye onke amaziko enziwe i-GCS enzelwe ukuba angathathi cala kwirhafu nokuba nayiphi na ingeniso efunyenwe, nokuba ithe yangeniswa kwishishini lasekhaya okanye lezwe, iyaxelwa kunyaka ofunyenwe kungakhathalekanga ukuba imali iyarhoxiswa kwiqumrhu okanye iphindisiwe kwimeko Amaziko ehlabathi. Ngaphaya koko, naluphi na ulwazi olufunyenwe kwi-GCS kunye / okanye iinkampani ezihlangeneyo kunye / okanye igqwetha (azilonjululwanga ukuba zenze, kunye nokuxoxa, ukufunyanwa, ukubonwa okanye ukubangomnye umlawuli okanye ukunxibelelana ngokungangqalanga akwenzi, ubudlelwane begqwetha kunye nayiphi na intlawulo ehlawulwayo aziyi kuthathwa njengemirhumo yomthetho.
Njengazo zonke izinto ezibalulekileyo zeshishini, i-GCS, abacebisi bayo, iiarhente, abameli, kunye nabasebenzi bacebisa ukuba ubonisane negqwetha elinelayisensi yokusebenzisa umthetho kunye ne-CPA enelayisensi kulawulo olusebenzayo malunga nolwakhiwo lweshishini lakho, i-LLC, ukuthembela okanye enye imveliso okanye inkonzo esibonelela ngayo kunye nokusebenza kwayo okuqhubekayo.
Iintlawulo, intlawulo kunye neKOTI
Ngokuqwalaselwa kweenkonzo ozikhethileyo, uyavuma ukusibhatala imali yenkonzo (e) efanelekileyo. Yonke imirhumo ehlawulwayo apha ngezantsi ayinakubuyiselwa ngaphandle kokuba sinikezela ngolunye uhlobo. Njengokuqhubeka kokuqwalaselwa kweeNkonzo, uyavuma: (1) ukubonelela ngolwazi oluthe kratya, olugqibeleleyo noluchanekileyo malunga nawe njengoko kufuneka kwinkqubo yesicelo kwaye (i-2) igcina kwaye ihlaziya le ngcaciso njengoko kufuneka ukuyigcina ikho ngoku, igcwele kwaye ichanekile. Lonke olo lwazi luya kubhekiswa kulo njengolwazi lweakhawunti (“Ulwazi lweAkhawunti”).
Ngokwenjenje usinika ilungelo lokuxela kubantu besithathu olo lwazi lweAkhawunti. Ngokugcwalisa nokungenisa isicelo sobhaliso lwegama, ubonakalisa ukuba i-Akhawunti yeNkcukacha kwisicelo sakho ichanekile kwaye ubhaliso lwegama elinyuliweyo, kude kube ngoku uyazi, akuphazamisi okanye kwephule amalungelo alo naliphi na isithathu. ipati. Umele ukuba igama lenkampani alibhaliswanga ngenxa yeenjongo ezingekho mthethweni.
Ukuba ucela izabelo ezigunyazisiweyo kumaNqaku akho oLwaziso oluNgaphezulu kwenani eliphezulu lezabelo ezivunyelwe ngurhulumente wokufaka iifayile, iphondo okanye ilizwe ngentlawulo yokufaka iifayile, unoxanduva lwayo nayiphi na intlawulo yerhafu engeniswe ngalo naliphi na ixesha. . Abanye, kodwa ayingabo bonke, ulawulo luhlawula iifizi ezongezelelweyo xa inani lezabelo kunye / okanye ixabiso lilonke lesitokhwe linyuka. Kuluxanduva lwakho ukuphanda elona nani liphezulu lezabelo ezivunyelwe ngurhulumente, iphondo okanye ilizwe ukuba lilungele imali yokugcwalisa. Inani lezabelo ezigunyazisiweyo kumaNqaku akho oMdibaniso lukhethwe ngokokubona kwakho. Ukuba awusiyalelanga ngenye indlela, isitokhwe esisezantsi zizabelo ze1500 ngaphandle kwexabiso lomhlaba ngaphandle kokuba ngawaphi amanani ngokwesiko ayahluka kulawulo oluthile okanye izabelo ezimbalwa zilungele umrhumo omncinci wokugcwalisa.
Xa kufanelekile, i-GCS ingenisa amaxwebhu kwi-ofisi efanelekileyo kaRhulumente yokugcwalisa iifayile. Xa i-GCS ifumana amaxwebhu abuyiselwe kwi-ofisi kaRhulumente, i-GCS, nawo, ithumela amaxwebhu kuwe ngokungqinelana nephakheji oyalele yona. Uyavuma ukuba iofisi kaRhulumente, hayi i-GCS, ilawula amaxesha amaxabiso apho amaxwebhu enkampani afayilishwa kwaye abuyiselwa kwa-GCS.
Emva kokuba iziko lifayilisiwe, ukuba ikhithi yencwadi okanye incwadi yokurekhoda ibandakanyiwe kunye nomyalelo, iya kwenziwa emva kokuba igama lenkampani lifayilisiwe kwaye lamkelwe ngurhulumente. (Isizathu soku kukuba ayinamsebenzi uku-oda i-kit ye-Corporate de urhulumente avume igama ukuze ikiti ingakhiwanga ngegama elala kurhulumente.)
UKUNIKELA INGXELO NOKUFAKA IYAFUNA
U-GCS akanoxanduva lokukukhumbuza okanye ukukhumbuza naziphi na iimfuno okanye uxanduva, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga nakweziphi na iingxelo zonyaka, iifilitha zerhafu, irhafu ekufuneka ihlawulwe, okanye ilizwe, iphondo, ikansile okanye iimfuno zomthetho wokushicilela okanye imirhumo enxulumene nemveliso okanye inkonzo thina. zibonelela. Okokubhalwa kukho i3,007 e-United States eneemfuno ezahlukeneyo zokugcwalisa kunye nemirhumo. Ngenxa yenani lezibalo kunye nolawulo oluthile kunye nemigaqo ehleli itshintsha, luxanduva lwakho ukuphanda iifayile zokuhlawula, iirhafu kunye nezinye iimfuno zepalamente yakho, iparishi, ilizwe, ilizwe okanye amanye amazwe afanelekileyo. Ukuzibandakanya kwe-GCS kwimveliso yakho okanye kwinkonzo iphela ngexesha imveliso okanye inkonzo yakho yayiswayo. Naziphi na iimfuno okanye uxanduva lokugcina imveliso yakho okanye inkonzo AKULONA uxanduva lwe-GCS kwaye luxanduva lwakho kuphela. Ngokukodwa, ngaphandle kokuba unekhontrakthi kwi-GCS ukuba wenze njalo, nakuphi na urhulumente, iphondo, ibhunga okanye iimfuno zopapasho oluhlangeneyo nomanyano lwakho, i-LLC okanye enye imveliso okanye inkonzo iya kuba luxanduva lwakho kuphela. Oku kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, ukugcwaliswa kwenqanaba lonyulo lweSahluko S Corporation. Ifomu yokufaka isicelo sobume be-S-Corporation kufuneka isayinwe ligosa lenkampani yakho. Kuba asilo gosa lenkampani yakho asinakusayina kwaye siyifayile le fomu. Nokuba igosa elonyuliweyo / umlawuli / iinkonzo zomlawuli zenziwa, asiyi kufunwa ifayile enjalo okanye sithathe inyathelo egameni lenkampani ngaphandle kokuba sigunyaziswe libandla elifanelekileyo. Asinaxanduva lokulahleka kweefom zerhafu okanye zokufika kade okanye ezinye iifayile, iintshukumo okanye ukungasebenzi, ngaphandle kokuba ubuqhophololo ngabom, kwimeko apho lowo utyunjiweyo, hayi iGCS, enoxanduva. I-GCS luluhlu lokulungisa kunye nenkonzo yokugcwalisa kwaye ayisiyo irhafu okanye ifemu yomthetho. Iirhafu kunye neemfuno zomthetho kufuneka zifunyanwe ngamaphepha-mvume, ngolwazi, ngokuziqhelanisa namalungu alo msebenzi njengamagqwetha kunye nababali.
Ukuba, ngomrhumo ongezelelweyo, ucela uncedo lwethu ekuvuleni i-akhawunti yebhanki, siya kwenza umzamo wokuvula i-akhawunti eyanelisa iimfuno zakho. Nangona kunjalo, uyavuma ukuba i-GCS ayizilawuli iinkonzo ezinikezelwa yibhanki okanye zeziphi iibhanki ezingayi kuvula uhlobo lweakhawunti oyifunayo, okanye nemizamo yakho yokugcwalisa uxwebhu lwebhanki olufunekayo. Uyavuma ukuba ibhanki, kodwa hayi i-GCS, ilawula isantya apho i-akhawunti yebhanki iya kuvulwa okanye ingayi kuvulwa. Uyavuma ukuba unoxanduva lokugcwalisa isicelo sokuvula i-akhawunti yebhanki iphela kwaye unike lonke ulwazi olucelwe yibhanki ukuze kuvulwe i-akhawunti.
Ngokwesiqhelo kulunge kuwe ukuba unganxibelelani nebhanki de ibe ivuliwe i-akhawunti. Isizathu kukuba siye sabona abathengi kaninzi besenza ingxelo ebhankini okanye sinxibelelana neebhanki ngendlela yokuthintela ukuvulwa kweakhawunti.
Uyavuma ukubamba i-GCS ingenabungozi kwimigaqo-nkqubo yebhanki kunye neemeko kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, oku kulandelayo: ibhanki iyala ukuvula i-akhawunti, ibhanki ithathe ixesha elininzi lokuvula iakhawunti kunendlela onqwenela ngayo, ibhanki ecela ulwazi olungaphezulu phambi kwebhanki. izovula iakhawunti, iinguqu kumgaqo-nkqubo webhanki, ukungakwazi ukuvula i-akhawunti ngebhanki enamasebe afanelekileyo okuhamba, isidingo sokwenza idipozithi kunye nokurhoxiswa ngeposi kunokuba ungene ebhankini, idiphozithi ethatha ixesha elide ukucacisa kune Umthengi unqwenela, ulwimi lwangaphandle lusetyenziswa ebhankini, ibhanki ingaboneleli zonke iinkonzo ezinqwenelwa ngumthengi, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga kumnxeba wokubambisa imali kwiakhawunti okanye ubukho okanye ukungabikho kwamatyala okanye amakhadi etyala okanye ubukho okanye ukungabikho kwe-Intanethi kwi-akhawunti, okanye ibhanki ekufuna ukuba uye ebhankini ngokwakho ngaphambi kokuba i-akhawunti ivulwe. Ukuba ibhanki ifuna uhambo unoxanduva olupheleleyo lwayo nayiphi na into yokuhamba kunye neendleko ezinxulumene noko. Ngamanye amaxesha, ukhetho ekuphela kwalo kukuvula i-akhawunti ebhankeni engenamasebe anokuhamba-hamba afanele abathengi okanye ibhanki engenawo amasebe okuhamba. Ukuba olu luhlobo lweakhawunti leyo iGCS inokwazi ukukuvulela yona, uyavuma ukuba i-GCS ilufezekisile uxanduva lwayo.
Kwimeko apho iGCS inyanzelekile ukuba ibuyisele yonke imali ehlawulelweyo kwiimveliso ezongezelelekileyo kunye neenkonzo ezithengiweyo ukongeza kwiakhawunti yebhanki ngenxa yokuba i-akhawunti yebhanki khange ivulwe okanye ukuba awonelisekanga kukhetho lweebhanki. Le yimeko nokuba isizathu esiyintloko sokuseka iziko elisemthethweni okanye yayala iinkonzo ezinxulumene nayo yayizezizathu zokuvula iakhawunti yebhanki okanye ixesha elibekiweyo laphoswa ngenxa yokulibaziseka kokuvulwa kweakhawunti. Umzekelo, xa uthe wa-odola i-LLC kunye ne-akhawunti yebhanki kunye ne-akhawunti yakho yebhanki ekhethiweyo ukuba ivule iakhawunti, olona nyango lolwenziweyo yi-GCS, ngokokukhetha kwayo, ukubuyisela kuphela le nxalenye yomrhumo ohlawulwe yi-GCS ngokubona kwi-akhawunti yebhanki. ukuvulwa, iindleko ezingaphantsi kunye nexesha elingene kuzo, okanye ukubonelela ngenye indlela yebhanki. I-GCS iqhube uphando olubanzi ukukhangela iibhanki eziza kuvula iiakhawunti ngaphandle kokuba ubukho, nto leyo evakala ngathi ingamaziko azinzileyo kwaye inikezela ngenkonzo efanelekileyo. Kuluxanduva lwakho ukugcwalisa isicelo seakhawunti yebhanki, ukubonelela ngenkuthalo efanelekileyo kunye nokubonelela ngamanye amaxwebhu afunwa yibhanki. Iibhanki kufuneka zihlaziye abathengi bazo ukuze benze imisebenzi esemthethweni nenesimilo. Ukusilela ukwenza njalo kungakhokelela ekubeni ibhanki ilahle ilayisensi yayo kunye / okanye ithintele ukubanakho kokuqhuba ukuthengiselana kumazwe angaphandle. Ke, iibhanki azaziwa ngokwenza ngokungafaniyo kwiimfuno zazo zokukhuthala.
Iimfuneko zokuvulwa kwebhanki ziquka, kodwa kungaphelelanga apho, ukugcwalisa isicelo seakhawunti, ukusayina ikhadi lokutyikitya, ukubonelela ngekopi yencwadana yakho yokundwendwela, idilesi yendawo ohlala kuyo enedilesi yakho yokuhlala, amaxwebhu enkampani yakho, ibhanki kunye / okanye ireferensi yobungcali. ileta kunye nezinye iimfuno ezahluka ngokuxhomekeka ebhankini. Ibhanki iya kuhlala ifowunela ukuqinisekisa ngobunyani bamaxwebhu. Ngokukubonelela ngegama lebhanki iGCS ibona inokwenzeka kwaye yenza umzamo wokukubonelela ngamaxwebhu okuvula i-akhawunti yebhanki, i-GCS ilufezekisile uxanduva lwayo phantsi kwesi sivumelwano.
Ukuba u-odole izinto okanye iinkonzo ezongezelelweyo, ezongeziweyo, eziphindiweyo, amaxwebhu okhutheleyo anokufuneka. Umzekelo, ukuba uthe walela iakhawunti yebhanki, umthetho unokufuna ukuba ibhanki igcine iseti yakho yesazisi kunye neyokuzazisa. Imigaqo inokufuna kwakhona itrasti okanye umboneleli ngenkonzo yenkampani ukuba abe neseti yentsusa yamaxwebhu akhutheleyo. Ke, kuya kufuneka ukuba unikezele ngeeseti ezininzi zoqobo.
IITRUSI, ISIQINISEKISO SEXESHA NOKWENZIWA KOMSEBENZI
Imigaqo yasekhaya kunye neyamanye amazwe isendaweni yokuthintela ukuxhaphaza imali kunye nokunye ukuhambisa okanye ukuhambisa imali ngokungekho mthethweni. Kananjalo, abathenjwa, oonobhanki kunye nabanye abakwicandelo leenkonzo zezezimali kufuneka zichonge amaqela afanelekileyo ukuthobela le migaqo kwaye xa kusenziwa izicelo zokurhoxisa okanye ezinye izicelo, amaxabiso agqithiselwe kumaqela afanelekileyo. Ke ngoko, kukho iimfuno-zakho-zabathengi ekufuneka zenziwe. Itrasti ayizukukhetha ngokungafaniyo neemfuno zokukhuthala ngenxa yokuba ukwenjenjalo kunokubangela izohlwayo kunye / okanye ukulahleka kwelayisensi yokuqhuba ishishini.
Olu luhlu lulandelayo, kodwa akufuneki konke konke, kumaxwebhu afunekayo kumthengi ukuze enze i-trust yamazwe aphesheya: IFomu yoVavanyo lwaBathengi, iafidavithi yeSolvency, ubungqina boMthombo weNgxowa-mali, uXwebhu loLwazi lweTrasti, iMali Umthetho wokuLawulwa kokuThengiswa, iXesha lokuBekwa ityala, ikopi yephepha lokufota (okanye ikopi yelayisensi yakho yokuqhuba kwimeko ezithile yanele) eqinisekiswe nguMntu olawula uNothile, ubungqina boqobo lwedilesi yakho Ityala lokusebenzisa, ingxelo yekhadi lesikweletu okanye ingxelo yebhanki-mayibe yeyentsingiselo kunokuba ifotokopi, ileta ebhekisa ebhankini. Uya kucelwa ukuba utyikitye amanye amaxwebhu angentla kunye nokubonelela ngekopi yokundwendwela njengoko kuchaziwe apha ngasentla, umthetho olawula ukusetyenziswa kwezinto (okanye ezinye njengoko kuchaziwe) kunye neleta yokubhalela esebhankini. Olu luhlu lungentla luyenzelwe ukubonelela ngomzekelo wamaxwebhu afunwa ngesiqhelo kodwa akukho siqinisekiso senziweyo sokuba amanye amaxwebhu awazukufuneka kwaye / okanye ezinye izicelo zenziwe.
Unoxanduva lokubonelela ngolwazi lokugcwalisa ukuthembela, kubandakanya ukuthembana komhlaba, ukuthembana okuphilayo kunye namanye amaxwebhu, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kumaxwebhu obuxoki kunye nokusinika amagama eqela. Sisebenza umsebenzi wokulungiselela kunye nokungena kwiindleko ngaphambi kokunikezela ngolwazi lokugcwalisa amaxwebhu akho. Ke, ukusilela kwakho ukubonelela ngolwazi esiludingayo ukufaka ulwazi lwakho kumaxwebhu ayisosizathu sembuyiselo ngenxa yezi ndleko zokulungiselela ezingafumanekiyo.
Iiakhawunti zomthengisi wekhadi letyala zisetyenziselwa ukubiza abathengi bakho abahlawula ngekhadi letyala. Ukuba, ngomrhumo ongezelelweyo, ucela uncedo lwethu ekuvuleni iakhawunti yomthengisi wekhadi letyala, siya kwenza umzamo wokuvula iakhawunti eyanelisa iimfuno zakho. Nangona kunjalo, uyavuma ukuba i-GCS ayizilawuli iinkonzo ezinikezelwa yinkampani yeakhawunti yomthengisi, amaxabiso anikiweyo, nokuba ngabathengisi abayi kuvula uhlobo lweakhawunti oyifunayo, okanye nemizamo yakho yokugcwalisa amaxwebhu e-akhawunti yomthengisi. Uyavuma ukuba inkampani yomthengisi yeakhawunti, kodwa hayi i-GCS, ilawula isantya apho iakhawunti yomthengisi izakuvulwa okanye ingavulwa. Uyavuma ukuba unoxanduva lokugcwalisa isicelo seakhawunti yomthengisi ngokupheleleyo kwaye unikeze lonke ulwazi olucelwe ngokuvulwa kweakhawunti.
I-GCS ASIYI GUARANTEE MERCHANT ACCOUNT FAYI okanye IIRESES. LE IKOMITI YENZIWAYO NGEKHAMPANI YOKUGCINWA NGOKUFUMANELEYO EMVA KOKUBA BAQINISEKILE ISICELO sakho. UNGAVUMELEKILE UKUBA I-GCS ayiXABULEKI NEZOHLOLO EZIQHUTYELWE Yinkampani ye-ACCOUNT YABADALA.
Uyavuma ukubamba i-GCS ingenabungozi kwimigaqo-nkqubo yeakhawunti yomthengisi kunye neemeko kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, oku kulandelayo: inkampani yeakhawunti yomthengisi eyala iakhawunti, inkampani ye-akhawunti yomthengisi ethathe ixesha elininzi lokuvula iakhawunti kunendlela oyithandayo, iakhawunti yomthengisi Inkampani ecela ulwazi oluthe kratya ngaphambi kokuba bavule i-akhawunti, idipozithi yokuqala efunekayo ebhankini, utshintsho kumgaqo-nkqubo, ukungakwazi ukuvula i-akhawunti ngamaxabiso owanqwenelayo, ukungakwazi ukuvula i-akhawunti yomthengisi ngemibandela oyithandayo, inkampani yeakhawunti yomthengisi hayi ukubonelela zonke iinkonzo okanye iirhafu ezinqwenelwa ngumthengi, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, imirhumo, ukugcinwa, imigaqo-nkqubo yomthengisi kunye nabanye.
Ngamanye amaxesha, ukhetho olunengqiqo kukuba uvule i-akhawunti yomthengisi kwinkampani ebiza ngaphezulu kwexabiso eliphakathi. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba inkampani yomthengisi iyithatha njengelicandelo “umngcipheko omkhulu” kwishishini, nokuba ngaba umxhasi ucinga ukuba ishishini linomngcipheko omkhulu okanye ukuba umthengi unembali ecocekileyo okanye irekhodi elilandelelweyo. Ukuba olu luhlobo lweakhawunti leyo iGCS inokwazi ukukuvulela yona, uyavuma ukuba i-GCS ilufezekisile uxanduva lwayo.
Kwimeko apho iGCS inyanzelekile ukuba ibuyisele imali ehlawulelweyo kwiimveliso ezongezelelekileyo kunye neenkonzo ezithengiweyo ukongeza kwiakhawunti yomthengisi wekhadi ngenxa yokuba inkampani yeakhawunti yomthengisi ayikwazanga ukuvulwa okanye ukuba awonelisekanga kukhetho lweenkampani ze-akhawunti yomthengisi. . Le yimeko nokuba isizathu esiyintloko sokuseka iziko elisemthethweni okanye yayala iinkonzo ezinxulumene nayo yayizezizathu zokuvula iakhawunti yomthengisi wekhadi okanye ityala elibekiweyo laphoswa ngenxa yokulibaziseka kokuvula i-akhawunti. Umzekelo, ukuba u-odole umbutho kunye neakhawunti yomthengisi kunye nenkampani ye-akhawunti yomthengisi oyile ukungavuli iakhawunti okanye ahlawulise amaxabiso aphezulu kunendlela oyinqwenelayo, olona nyango luphezulu yi-GCS, ngokokukhetha kwayo, ukubuyisela kuphela loo nxalenye yomrhumo ubhatalwe ukuba i-GCS ibona inxulumene nokuvulwa kweakhawunti yomthengisi okanye icandelo lomrhumo, ngaphandle kwendleko zepoksi, okanye ukubonelela ngenye indlela yeakhawunti yomthengisi. Umrhumo ohlawulelwe ukuseka iakhawunti yomthengisi uhlawulwa kubantu besithathu ukwenza uvavanyo lomngcipheko, ke yona imali ehlawulelwayo ukuqala umthengisi ayibuyisi ngokupheleleyo. I-GCS iqhube uphando olubanzi lokufumana iinkampani ze-akhawunti yomthengisi eya kuthi ivule ii-akhawunti zamashishini asezantsi, aphakathi nalawo asengozini enkulu, evakalelwa kukuba ngamaziko afanelekileyo kwaye anikezela ngenkonzo efanelekileyo. Ngokukubonelela ngamagama eenkampani zomthengisi ii-akhawunti ze-GCS zibona zinokwenzeka kwaye wenza umzamo wokukunika amaxwebhu okuvula i-akhawunti yomthengisi okanye ukuthunyelwa, i-GCS ilufezekisile uxanduva lwayo phantsi kwesi sivumelwano.
Inkqubo yeofisi, equlathe inombolo yefowuni, inombolo yefekisi kunye nedilesi inikezelwa ngokuncediswa ngumthengi kuphela. Inombolo yeofisi yefowuni yenombolo yefowuni ihlala iphendulwa ziinkampani ezininzi. Ke ngoko, umntu obizayo kufuneka ashiye igama lenkampani abayibizele oko ke siyokwazi ukuba lo myalezo uza kudluliselwa kubani. I-GCS ayinoxanduva ngeposi elahlekileyo, iifowuni eziphosiweyo, iifeksi, amathuba ezeshishini aphulukene nayo nayiphi na ilahleko. Ngokwendalo, iimali ezibuyiselweyo azifumaneki kwakuba inkonzo iqale ngenxa yokuba i-GCS inexabiso elipheleleyo lenkqubo yeofisi ngaphambili.
IKHREDITHI YEKHREDITITI kunye neNkampani eyalupheleyo ye-SHELF
Le Migaqo yeNkonzo ichaza ubukhulu kunye nokusikelwa umda kwezibophelelo zeNkampani kuMthengi kunye noMgaqo-nkqubo owamkelekileyo wokuSetyenziswa kweeNkonzo kunye neemveliso nguMthengi. Inkampani iya kuba yiyo kuphela kunye ne-arbiter yokugqibela malunga nokutolikwa kwesi siVumelwano. Ngokusebenzisa iiNkonzo kunye neMveliso yeNkampani, uMthengi uyavuma ukubotshwa ngokwemigaqo echazwe kwesi siVumelwano.
Ukuba iyalelwe, Inkampani iyakubonelela ngenkampani okanye inkampani ngetyala elinoxanduva kuMthengi. Inkampani iyakubonelela umThengi ngepakethi eyamkelekileyo nge-imeyile okanye ukuhanjiswa kweposi. Umthengi unoxanduva lokugqiba iipakeji ezamkelekileyo kwaye azibuyisele kugqityiwe ngokufanelekileyo kwiNkampani. Nje ukuba ipakethi eyamkelekileyo (ebhekisa kwisicelo kunye / okanye amanye amaxwebhu aceliweyo) igqityiwe nguMthengi kwaye ibuyiselwe kwiNkampani, iNkampani iza kungenisa ulwazi kwi-Dun & Bradstreet ngenjongo, kodwa kungaqinisekisi, ukubonelela ngezi nkonzo zilandelayo :
1. Nikezela ngeprofayili yeshishini lokuthenga ngetyala ngakwicala elinye okanye nangaphezulu kwiziko eligcina ulwazi ngeshishini.
2. Khawulezisa inkqubo yokwakhiwa kwekhredithi yiNkampani okanye amahlakani ayo abhatala imali ekhawulezileyo kwi-arhente yokunika ingxelo ngetyala (ies) ukuba uhlawulele inkonzo ehambileyo.
3. Nika ipotifoliyo yeDun & Bradstreet (D&B) kunye neakhawunti.
4. Yenza i-6 yengxelo ephambili ye-D&B yetyala.
5. Yenza amanqaku e-5 D&B kunye nokulinganisa kwiingxelo ze6.
6. Ngenisa kulwazi lwe-D&B abalucelayo ukuba benze amanqaku e-D&B kunye nemilinganiselo.
7. Ncedisa ekumiselweni kwabathengi kwi-4-6 kwiireferensi zorhwebo kwinkampani.
8. Yongamela iiphothifoliyo zamatyala e-6 D&B.
Umthengi uya kwenza oku kulandelayo:
1. Gcwalisa ngokufanelekileyo ipakethi eyamkelekileyo kwaye uyibuyisele kwiNkampani edibeneyo.
2. Nikeza lonke ulwazi olucelwe yiNkampani kunye / okanye intsebenziswano yalo ukugcwalisa iprofayili yamatyala.
3. Landela isikhokelo seNkampani kunye / okanye esidibeneyo kwinkqubo yokugqitywa kweprofayili yamatyala.
Inkampani endala okanye inkampani eshalofini liqumrhu, i-LLC okanye elinye iqumrhu elifana nelathi lasekwa ngomhla ongaphambili.
UKUSETYENZISWA KWEENKONZO ZENKAMPANI NEEMveliso KULO MNGCIPHE WAMAKHAYA. INDLELA YOKUQHUTYELWA KWENKQUBO YOKUNIKEZA IINJONGO, KUNYE NENKQUBO YOKUFUNDAZA, BENZA BENZE IZIPHAKAMISO ZEZOBUCHULE NGOKUTHETHA IZIPHUMO NGOKUSETYENZISELWE UKUSETYENZISELWA KWEENKONZO ZENKAMPANI NEENKONZO OKANYE NGOKUFUMANELEKILEYO, OKANYE UKUHLAZIYELWA KWENKONZO YOLWAZI NGEENKONZO OKANYE KUKHUNJULWE INKONZO YEKHAMPANI OKANYE KWENKONZO YEKHAMPANI HLALUTYA OLUNYE ISELULEKILEYO ESIPHANTSIWEYO KWISIVUMELWANO. Oku kubandakanya ukulahleko KWEZOBUCHULE, NGOKUXELAYO UKUHLAZIYELWA, OKU KUFUMANEKA UKUZE UFUMANE ISELULEKO NGOKUFUMANELEKILEYO UKUZE UFUMANE IXESHA LOKUTHENGA OKANYE AKUKHANGANYELwanga NGEKHAMPANI NABASEBENZI BENKONZO OKANYE NGOKUXELAYO NANGOKU. INKAMPANI AYISELULA INDLELA UXANDUVA LOKUQHUTYELWA KWAMALUNGISELELO OKULUNGISA IXESHA LOKHUSELEKO. INKAMPANI IQHAWULA UMNYANGO WOKUZIPHATHA. IKHOMPYUTHA LUXANDULEKILEYO LOKUSETYENZISWA KWE-CREDIT KWIPROFITI YOKUFUNDA IIMPAWU ZOKUFUNDA NGOKUFUMANELEKILEYO NESIFUNIWEYO NGEKHAYA. INombolo ye-ID YENANI okanye yeRhafu yeTax YENKAMPANI EMdala / ye-SHELF ayinakho ukuBALULELA IXESHA LENKAMPANI YENKONZO KANYE BANOKUFUNYANWA APHA NGOKU.
UKUHLAZIYWA KOKUFUNDA KAKHULU KWENKONZO YONKE IBANGO LENZELWE NGEKHAMPANI, OKANYE NANYE NANYE OLUNYE NXENYE, UKUHLAZIYELWA IFOMU, UKUQHUTYELWA NAYELIPHI IXESHA LENKCAZO YOKUVUNYELWA EKUQHUTYELWELWEYO, KWIXESHA LOKUGCINWA KWEXESHA LONKE NGOKUGQIBELA IXESHA LOKUFUMANEKA KWEXESHA LOKUQHUTYELWA LENKampani. Ezi nkonzo zilapha ngentla zinokuthatha ukuya kwi-120 ukuya kwiintsuku zomsebenzi we-180 ukusukela ngala mhla ubuya uMthengi kunye nenkampani ifumana ipakethe eyamkelekileyo efanelekileyo.
NGENXA YOKUQINISA UKUFUNDA NGEXESHA LOKUZIPHATHA, UMKHUSELEKILEYO AKUFUNI UKUQHAGAMSHELANA NOKUVUNYELWA KWEENKCUKACHA NGOKUQINISEKILEYO NGEXESHA LOPHAKATHI NANGaphambi kokuba aQINISEKE UKUGQIBELA KWENKAMPANI. UMQEQESHI AKAZI UKUZE UMSEBENZI OWENZIWEYO WOKUGQIBELA WENZELWE PHAMBI KWEFAYILI ETHUNYELWE UKUHLAZIYELWA KWENGINGQI YOKUHLAZIYA. UKUTHENGISELWA KWEFAYILI NGOKUGQIBELA OKANYE UKUQHAGAMSHELANA NOKUFUNDA NGOKULUNGISELELA I-CRENIT YOKUGCINWA KWENKULUNGWANE KANGANGEMPILO YOKUZIPHATHA KWEMPAHLA YOKUZIPHATHA NOKUFUMANEKA KWEZOBUCHULE. INKAMPANI YENKXASO-MALI YOKUFAKA ISIQINISEKISO KWI-CREDIT REPORTING AGENCY EMVA, ASIQHUTYELANI NOKUGQIBELA IXESHA LOKUFUNA IXESHA, XA BANGEKHO ISIKHOKELELO SIYA KUTHENGISELA UKUTHENGISELWA NJENGOKUXHASA IIREKHODI, IZIBHALO NEENKCAZO NGEZO ZISENZO NGOKUZO, LIZOQHUTYELWA UKUZE UNAKO UKUHENGA NENKCAZO YOKUHLAZIYA KWEENKONZO AKUKHOXELANI NJENGESESE. Nayiphi na imali eyongezelelweyo njengenxalenye yenkqubo yokwakha ityala iya kuba luxanduva lomthengi. Oku kulandelayo akuyi kuhlawulwa kwiCAMPANI njengoko ziinkonzo ezibonelelwa ziinkampani zeqela le3rd. Oku kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho kwi-D&B kumiselwe umrhumo osusela kwi-zero ukuya kumakhulu amahlanu anamashumi alithoba eedola, iakhawunti yokurhweba yokumisela umrhumo, iindleko zeemveliso ezivela kubathengisi, iifizi zokugcwalisa nge-STATE, imirhumo yelayisensi yeshishini, ukuseta ifowuni yeshishini okanye enye ifowuni enxulumene nayo. imirhumo, imirhumo yeengxelo zakho zamatyala obuqu, imirhumo yebhanki kunye nayo nayiphi na enye intlawulo eyenziwa ngokwesiko ngokubanzi kwishishini. Zonke ezi zinto zingentla yimali ekufuneka ilindelwe kuye nabani na ocwangcisa ukuba kwishishini.
Umthengi uyaqonda kwaye uyavuma ukuba kufuneka basebenzisane ngokugqibeleleyo NENKAMPANI ekusingatheni ngalo mbandela, besenza konke okuyimfuneko ukunika INKAMPANI ulwazi olucelwe yiNkampani; Ngaphaya koko, uMthengi uyakuyishiya INKONZO phantsi kolawulo kunye nolawulo LENKAMPANI ukuba nje esi sivumelwano sihlala sisebenza, uMthengi akasayi kubonelela ngolwazi nakwezinye izinto okanye abantu ababandakanyekayo okanye onxibelelana ngqo nomnye umntu okanye iqumrhu ngalo mbandela ngaphandle kokuba kuyalelwe yiKHAMPANI NJENGOKO KUNOKUXELWA NGOKUGQIBELA NGOKUGQIBELA.
Ukongeza, uMthengi uyavuma ukuhlawula ngalo lonke ixesha ishishini labaThengi kunye neebhili / iiakhawunti ezizezakho kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwimigca yamatyala, amakhadi okuthenga ngetyala, iiakhawunti ezihlawula amatyala kunye nemboleko-mali. Umthengi uyavuma ukungasenzi isicelo setyala ngaphandle kokunika isaziso senkcitho ngaphambili kwinkampani. Umthengi uyavuma ukuba isixa lilonke letyala obolekwe yinkampani leyo njengabacebisi bokuncedisa ekufumaneni itotali yemizamo ethengiweyo yomthengi kunye nenkampani.
Ukusukela ngoku, iNkampani igcina ilungelo lokuguqula iVumelwano nangaliphi na ixesha amaxesha ngamaxesha kwaye naluphi na olo tshintsho luya kusebenza ngokuzenzekelayo kubo bonke abathengi xa yamkelwe yiNkampani kwaye ipapashwa kwiphepha elifanelekileyo le-https. .com / okanye indawo elandelayo njengewebhusayithi inokuhlaziywa.
Nangona igama lakho okanye umntu omtyumbileyo eza kuvela kumaxwebhu athumela inkampani kuwe okanye kwi-designee yakho, uyavuma ukuba igama lakho okanye umntu ozahlulele kuye angavela okanye angavela kumanqaku okufakwa okanye amanqaku ombutho. Kukho uxwebhu olwahlukileyo olutshintshela kwinkampani okanye kwi-assignee yakho. Eli nani lilingana negama lomenzi wemoto osele kwimoto, emva koko uxwebhu lwesihloko olusetyenziswa njengolusemthethweni, olubophelelayo. Ngokukwanjalo, thina okanye iiarhente zethu zenza iqumrhu njengesihlanganisi ?? kwaye wenze inkampani enamatyala amaninzi njengomququzeleli ?? kwaye emva koko wenze amaxwebhu agqithisela inkampani kuwe. Ngamanye amaxesha, inkampani yethu okanye umntu esichonge yena uya kuba ligosa lokuqala, umlawuli, ilungu okanye umphathi wenkampani. Uyavuma ukuba ukuhanjiswa kwenkampani kuwe kuya kubonakala kumaxwebhu okudlulisela hayi amanqaku ngokwawo.
Ukuba uyalele inkonzo ebandakanya ukuhambisa i-imeyile, uya kuhlawula iposti kunye nokuphatha izinto ezithunyelwe kuwe. Idipozithi yeedola zaseMelika ezingamashumi amabini anesihlanu, okanye ngaphezulu ukuba uyakhankanya, ziya kongezwa kwiindleko zenkonzo yakho yokuhambisa iposi. Le dipozithi iya kuhlaziywa ngokuvunywa kwakho. Ukwasigunyazisa ukuba sihlawulise ikhadi lakho letyala kwifayile ukukhusela iindleko zokuhambisa iipakeji.
Kunokubakho imirhumo eyongezelelweyo yokuphambanisa edibene ne-oda yakho esinokucela ukuba ingadweliswanga kwiwebhusayithi yethu. Ezi ntlawulo zingaba zezezimali ezongeziweyo zokuthumela, uxwebhu ngokusemthethweni, kwiiphakheji zokubonisana, kwimirhumo yokuhlaziya, okanye ezinye iifizi okanye izinto ezingalindelekanga ezinokuthi zinxulunyaniswe nomyalelo wakho okanye ukwanda kweendleko zethu ezifumanekayo ngaphandle kweepakethi ebesisazisiwe ngaphambi kokupapashwa kwethu. amaxabiso ahlaziywa. Iidilesi kule ndawo kunye nakwiiwebhusayithi ezihlangeneyo zinokuthi okanye zingahlawuleki. Abanye okanye bonke abameli beenkampani basebenza kwiindawo zokuhlala ezikude kunokuba kwindawo enye yeshishini. Ezinye iidilesi zidwelisiwe kunye neefoto, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwimifanekiso yezakhiwo, ziboniswa iinjongo zembali kwaye azimeleli imeko yangoku. Nceda uqiniseke ngokuqhagamshelana nommeli kwidilesi efanelekileyo ngaphambi kokuba uthumele imbalelwano. Iinkonzo zoMdibaniso ngokubanzi, Inc. yagqitywa ukugcwaliswa ngoJuni ngomhla wesibhozo kunyaka wamashumi alithoba anesithandathu e-US kwi-Nevada. Abanini benkampani bayifumene okanye malunga noJanuwari wesithathu kunyaka wamawaka amabini anesibhozo. Inkampani ibikho kumgca wayo weshishini ngexesha lokuphila kwayo. Igama lenkampani litshintshile kwaye inkampani ihlaziywa, yahlaziywa kwaye yabuyiselwa. Uyavuma ukuba ungaxhomekeki kubudala be-GCS njengesizathu sokuqhuba nathi nathi. Esi sivumelwano sonke sichaphazela lonke unaniselwano lwangoku nolwexesha elizayo phakathi kwamaqela.
Uyavuma ukuba singaphinda sihlaziye imigaqo nemiGaqo yesi siVumelwano kwaye sitshintshe iinkonzo ezinikezwe phantsi kwesi siVumelwano. Naluphi na uhlaziyo olunjalo okanye olo tshintsho luya kubopha kwaye lusebenze kwangoko ekuthumeleni ingxelo ehlaziyiweyo. Imvumelwano okanye utshintsho kwinkonzo (ze) kwiwebhusayithi yethu, okanye kwisaziso sakho nge-imeyile okanye ngeposi eqhelekileyo. Uyavuma ukuphononongwa iwebhusayithi yethu, kubandakanya esi siVumelwano, amaxesha ngamaxesha ukuba wazi naluphi na uhlaziyo olunje. Uyavuma ukuba, ngokuqhubeka nokusebenzisa iinkonzo zethu kulandela isaziso saso nasiphi na esihlaziyo soVumelwano okanye utshintsho kwiinkonzo (s), uya kuthobela naluphi na uhlaziyo okanye olo tshintsho.
Uyavuma ukuba uxanduva lwethu lonke, kunye neyeza lakho elikhethekileyo, ngokubhekisele kuzo naziphi na iiNkonzo (ezinikezelweyo) phantsi kwesi siVumelwano kwaye nakuphi na ukwaphulwa kwesi siVumelwano kuphelela kwimali oyihlawuleleyo kwiiNkonzo. I-GCS ayizukubekwa tyala ngayo nayiphi na into ethe ngqo, ngokungathanga ngqo, ngokuthe ngqo, okhethekileyo okanye ngenxa yomonakalo obangelwe kukusetyenziswa okanye ukungakwazi ukusebenzisa nayiphi na inkonzo okanye indleko zokuthengwa kweenkonzo ezingena endaweni yazo. Ngenxa yokuba ezinye ithi, amaphondo okanye ilizwe akuvumeli ukukhutshwa okanye ukunqunyulwa kwembonakalo ngenxa yokonzakala okufanelekileyo okanye okwenzekileyo, kumazwe anjalo, amaphondo okanye ilizwe, uxanduva lwethu lubekelwe umda ngokomthetho ovunyelweyo. Nje ukuba ubhaliso lwamagama eenkampani lwenziwe, alunakucinywa kwaye olungabuyiswayo. Phambi kokungenisa iodolo yakho, jonga kwakhona ukupela kunye nokuchaneka kwegama lakho lenkampani.
I-GCS iyabhenca nakuphi na ukulahleka okanye uxanduva olubangelwa, kodwa kungaphelelanga apho: (1) ilahleko okanye uxanduva olubangelwa kukulibaziseka ukufikelela okanye ukuphazamiseka; (2) ilahleko okanye uxanduva olubangelwa kukungahanjiswa kwedatha okanye ukuhanjiswa kwedatha; (3) ilahleko okanye uxanduva olubangelwa zizenzo zikaThixo; (4) ilahleko okanye uxanduva olubangelwa ziimpazamo, ukukhutshwa, okanye ingxelo engeyiyo nakwezo zonke iinkcukacha ezinikezwe phantsi kwesi siVumelwano.
Uyavuma ukuba asizukubekwa tyala ngayo nayiphi na ilahleko yobhaliso kunye nokusetyenziswa kwegama eliqokelelweyo lombhalisi, okanye ukuphazamiseka kweshishini, okanye naluphi na uhlobo olungathanga ngqo, olukhethekileyo, oluzenzekelayo, okanye lomonakalo olwenziweyo walo naluphi na uhlobo (kubandakanya inzuzo elahlekileyo) isenzo nokuba sisivumelwano, ukuhlukunyezwa (kubandakanya ukungakhathali), okanye kungenjalo, nokuba sithe sacetyiswa ngento yokonakala.
Uyavuma ukukhulula, ukusiqinisa, kwaye usibambe, iikontraki zethu, iiarhente, abasebenzi, amagosa, abalawuli, abanini kunye nababandakanyekayo abangenabungozi kuwo onke amatyala, amabango kunye neenkcitho, kubandakanywa imirhumo yamagqwetha, umntu wesithathu onxulumene okanye ovukayo phantsi kwesi siVumelwano, Iinkonzo ezibonelelwe apha ngezantsi okanye ukusebenzisa kwakho iiNkonzo, kubandakanya ngaphandle kokophula umthetho wakho nayiphi na impahla okanye ilungelo lokushicilela lomntu okanye iqumrhu, okanye ukophula nawuphi na umthetho wethu osebenzayo okanye umgaqo-nkqubo onxulumene nenkonzo . Ukuba i-GCS isoyikiswa ngomntu wesithathu, sinokufuna isiqinisekiso esibhaliweyo kuwe malunga nesithembiso sakho sokusibeka ematyaleni. Ukusilela kwakho ukubonelela ngezi ziqinisekiso kunokuthathwa njengokwaphula isivumelwano sakho.
Uyavuma ukuba ukungaphumeleli ukuthobela nawaphi na amalungiselelo esi siVumelwano kunokubonwa ngathi kukophula izinto kwaye sinokukunika isaziso esibhaliweyo, esichaza ukophula umthetho, kuwe. Nakuphi na ukophula kwakho awuyi kuthathwa njengokuthethelela kuba asenzanga nto ngaphambili ukuphendula loo nto, okanye nakuphi na ukwaphula kwakho umthetho.
I-GCS ifuna ukubonelela ngamaxabiso afanelekileyo nokhuphiswano. I-GCS inelungelo lokutshintsha indlela yokuma kwamaxabiso ngexesha ngaphandle kwesaziso. Umzekelo, iqondo elinye lingacatshulwa ukuvuselela ubume beshishini xa ukuthengiselana kokuqala kuchithwe, kodwa elo nqanaba linokutshintsha kwixesha elizayo xa uvuselelo lubangelwe ngenxa yokunyuka okungalindelekanga kwemirhumo karhulumente okanye kwiindleko zeepokotho, okanye kolunye. izizathu. Iingxelo ezenziwe yi-GCS esidibana kunye / okanye ukubetha amaxabiso okhuphiswano ziya kutolikwa njengoko sihlala sibethe amaxabiso okhuphiswano kwaye sigcine ilungelo lokubetha amaxabiso abo bakhuphisana nabo kukhetho lwe-GCS kuphela. I-GCS ayinyanzelekanga ukuba ibuyise umahluko phakathi kwe-GCS kunye nexabiso lomkhuphiswano emva kokuba intengiso iphelile.
Uyavuma ukuba, ngokurejista okanye ngokubekisa igama lakho olinyuliweyo, olo bhaliso okanye ugcino alunikezeli ukungathathi cala ekuchaseni ubhaliso, ukubhuka, okanye ukusebenzisa igama lenkampani. Ukongeza, awunakuxhomekeka kwinto yokuba iqumrhu lakho lenziwe, okanye amakhadi ethu eshishini, iiletahedi, okanye ungene kwezinye iindleko ezinegama lenkampani elicetywayo kude kube semVA kokuba ufumene uxwebhu lwantlandlolo, ilizwe, iphondo okanye urhulumente obumbeneyo . (Amanye amazwe, amaphondo okanye ilizwe liza kukhupha "isiQinisekiso" sokufakwa, umzekelo).
Uyavuma kwaye ugunyazisa ukuba ulwazi osinike lona ukuba silubhalise okanye siligcinele igama lakho, lilonke ulwazi lwakho kunye nenkolelo, zichanekile kwaye zigqibelele, kwaye ukuba naluphi na utshintsho oluza kubakho kolu lwazi luya kusinikwa kwangexesha. ngokweenkqubo zokuguqula ezinokubakho ngelo xesha. Ukuba i-odolo yakho ibibekwe ngommeli, uya kwenza umzamo obambekayo wokubhala ulwazi oluchanekileyo malunga negama lenkampani oyikhethileyo, igama lakho, idilesi kunye nolunye ulwazi. Nangona kunjalo, iimpazamo okanye utoliko olubi lwenzeka. Uyakubamba i-GCS ingenabungozi ngenxa yeempazamo ezinjalo okanye ukutolikwa. Olona khetho lufanelekileyo kukuba unikezele ngolwazi ngokubhala nge-imeyile okanye ngezinye iindlela zekhompyutha ukunceda ekuqinisekiseni ukuchaneka okukhulu. Uyavuma ukuba ukusebenzisa kwakho iiNkonzo zethu kumngcipheko wakho wedwa. Uyavuma ukuba iiNkonzo (ezinjalo) zinikezelwa “ngoku,” “ngokufumanekayo” ngesiseko. Ngokucacileyo siyazicekisa zonke iiwaranti zalo naluphi na uhlobo, nokuba kuyacaca okanye kucacisiwe, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwimvumelwano ebekiweyo yokuthengisa, ukuqina kwenjongo ethile kunye nolwaphulo-mthetho. Asenzi siqinisekiso sokuba iinkonzo ziya kufezekisa iimfuno zakho, okanye ukuba iinkonzo ziya kufika ngexesha elikhuselekileyo, okanye ezikhuselekileyo okanye ezimpazamo; kananjalo asenzi siqinisekiso malunga neziphumo ezinokufumaneka ngokusetyenziswa kweeNkonzo okanye ngokuchaneka okanye ukuthembakala kwalo naluphi na ulwazi olufunyenweyo.
Thina, ngokwembono yethu, sinelungelo lokwala ukubhalisa okanye ukugcina igama lakho olinyuliweyo. Kwimeko apho siyala ukubhalisa okanye ukugcina igama lakho, siyavuma ukubuyisa imali efunekayo. Uyavuma ukuba asizukubekwa tyala ngenxa yelahleko okanye ngomonakalo onokubangelwa kukwala kwethu ukubhalisa igama lakho elihlanganisiweyo.
Izihloko zecandelo eziqulathwe kwesi sivumelwano zezizathu zokujonga kuphela kwaye aziyi kuchaphazela intsingiselo okanye ukutolikwa kwesi sivumelwano.
Kwimeko apho naliphi na igatya lesi siVumelwano libanjelwe ukuba linganyanzeliseki, loo malungiselelo aya kuncitshiswa okanye ancitshiswe ukuya kubuncinci obufunekayo ukuze isiVumelwano siqhubeke sisebenze ngokupheleleyo kwaye siphume.
Uyavuma ukuba esi siVumelwano silingana nesivumelwano esipheleleyo nesikhethekileyo phakathi kwakho nathi malunga neenkonzo zethu. Esi siVumelwano sigqithisa ezinye izivumelwano kunye nokuqonda kwangaphambili, nokuba kusekwe ngokwesiko, ukuziqhelanisa, umgaqo-nkqubo okanye phambili.
Esi siVumelwano kungenwa kwisimo saseMelika eFlorida kwaye siya kwenziwa ngokomthetho weFlorida, ekhethekileyo ekukhetheni kwakhe umthetho. Iqela ngalinye kwesi siVumelwano linikezela kulawulo olukhethekileyo lweLizwe kunye neNkundla zoMdibaniso ezinolawulo kwi-County ye-Broward kwimo yeFlorida, kwaye zirhoxisa naluphi na ulawulo, indawo, okanye iforamu engachasanga kwiinkundla ezinjalo. Ngalo naliphi na inyathelo lokunyanzelisa esi siVumelwano, umntu okhoyo uya kuba nelungelo kwiindleko zenkundla ezifanelekileyo kunye neefizi zegqwetha.
Esi siVumelwano sibumba isivumelwano sonke esiphakathi kwakho ne-GCS kwaye sigqithisela nasiphi na isivumelwano sangaphambi kokuba sibhalwe ngomlomo okanye sibhaliwe, phakathi kwakho ne-GCS.
-Siyanibulela ngokukhetha iiNkonzo eziManyanisiweyo, Inc. kunye nee brand ezinxulumene nazo njengenkonzo yokugcwalisa iifayile.
Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngemibuzo okanye iinkxalabo onokuba unazo.
Iinkonzo zoMsebenzi gabalala, Inc.
I-4699 N. Federal Hwy, iSuite 101
I-Pompano Beach, FL 33064
Isimahla: + 1-888-234-4949
Ngqo / Int'l: + 1-661-310-2930
Umnxibelelanisi nge-elektroniki: Gcwalisa ifom yokubuza kweli phepha